Ahoana no handefasana ny Windows 10 Feature Updates? WebSetNet
Home/System Admin/Windows/Ahoana ny fametrahana Windows Updates momba ny Windows 10
Ahoana ny fametrahana Windows Updates momba ny Windows 10
Martin King Sep 30, 2018
0 374 Novaina ny 2 minitra
Manome karazana fanavaozana roa ho an'ny Windows 10 i Microsoft. Ny fanavaozana kalitao dia tonga farafahakeliny indray mandeha isam-bolana ary manome fikojakojana ny bug sy fiarovana amin'ny filaminana. Ny famoahana ny Fehezam-paritra dia avoaka isaky ny roa ambin 'ny folo ary izy ireo dia dikan-teny vaovao amin'ny rafitra miasa. Ireo famoaham-baovao roa ambin 'ny folo taona dia navoaka tao amin' ny Semi-Annual Channel (SAC) ary dia tohanan'ny volana 18.
Ho an'ny fampandrosoana maharitra dia tsy maintsy manatsara ny version Windows iray ianao raha vao vita ny daty napetrakao. Azonao atao ny mijery ny lisitry ny dikan-teny maoderina sy ny daty farany amin'ny serivisy Tarehimarika momba ny fiainan'ny Windows lifecycle. Na dia izany aza, misy iray ihany ny fitsipika. Raha toa ianao ka mihazakazaka Windows 10 Enterprise na Education SKU version 1709 na fanavaozana iray vao haingana, dia mahazo enim-bolana fanampiny ianao. Ny mpanjifan'ny entrepreneur sy ny fanabeazana dia afaka mandoa ny fanampiana mihoatra ny daty farany.
Ny fanavaozana ny Windows 10 maharitra (LTSC) amin'ny alàlan'ny serivisy (LTSC) dia nahazo fanohanana folo taona: dimy taona ary dimy taona no nitohy. Fa raha tsy mila mametraka Windows 10 ianao ao amin'ny rafi-pitantanana misioneran'ny misiona izay tsy azo ovaina tsy tapaka, tokony hampiasa Windows 10 ianao amin'ny fampiasana ny Channel Semi-Annual.
Ny fikambanana mampiasa ny Windows Server Update Services dia afaka misafidy ny fotoana hanajana ny fanavaozam-baovao. Saingy, araka ny nolazaiko etsy ambony, ny famoahana ny daty farany amin'ny daty farany, dia tsy hanome vaovao farany intsony i Microsoft. Na dia tsy ankatoavinao fanavaozam-baovao ao amin'ny WSUS aza ny Dual Scan, dia mety midika fa naorina aza izy raha toa ka mihazakazaka Windows 10 version 1607 na aoriana ianao. Raha mampiasa WSUS ho an'ny Windows updates ianao, dia ataovy azo antoka fa ny Dual Scan dia kilemaina mba hisakanana ny mpanjifa misintona vaovao vaovao avy amin'ny Windows Update. Ankoatra izany, esory ny fidirana Hijerena ny vaovao farany ao amin'ny app Settings.
Ho an'ireo fikambanana na olon-tsotra tsy mampiasa WSUS, dia azo ampiasaina ny WUfB mba hanemorana ny fanavaozana sy ny kalitaon'ny fanavaozana. WUfB dia andian-dahatsoratra politika izay mamaritra rehefa manomboka mametraka sy mametraka patch ny Windows Update. Ho fampahalalana bebe kokoa amin'ny WUfB, jereo Understanding Windows Update for Business, Inona no niova tamin'ny Windows Update for Business, ary Windows 10 Tip: Manangana fikirakirana Windows amin'ny Business amin'ny fampiasana ny politikan'ny vondrona amin'ny Petri. Ireo mpampiasa manana zon'ny komity eo an-toerana ihany koa dia afaka manova ny rindrambaiko WUfB ao amin'ny app Settings.
Windows vaovao ho an'ny vondron'orinasa politika (Image Credit: Russell Smith)
Matetika, Windows 10 dia natsangana hampiasa ny sampana fanavaozana ny Semi-Annual Channel (Targeted). Midika izany fa raha vao misy fitaovana fanamafisana ny fitaovana ampiasainao dia hahazo izany ianao. Fa afaka misafidy ny hampiasa ny sampana fahitalavitra Semi-Annual kosa ianao, izay tsy manome ny fampisehoana farany indrindra mandra-pahatonga an'i Microsoft mihevitra fa mety amin'ny fampiasana ny orinasa betsaka. Ity daty ity dia matetika eo ho eo amin'ny efa-bolana aorian'ny famoahana ny fanavaozam-baovao dia alefa any amin'ny sampana SAC (Targeted).
Afeno ireo fanavaozam-baovao ao amin'ny app App Settings (Sary Sary: Russell Smith)
Ny WUfB dia afaka miato na manafoana ny fanavaozana. Azonao atao ny manamaivana fanavaozam-baovao momba ny vaovao sy ny fanavaozana kalitao amin'ny andro 35. Rehefa tapitra ny andro 35, dia hanatsotra ny fampiasana Windows vaovao indray ny fanavaozana. Ho an'ny fanaraha-maso misimisy kokoa, azonao atao ny miala amin'ny fampisehoana fampisehoana fotsiny mandritra ny taona 1. Raha toa ka mihazakazaka Windows 10 Home ianao, dia tsy manana vintana satria tsy misy ny fanovana WUfB. Tsy maintsy mametraka fanavaozana vaovao vaovao ianao raha vantany vao tonga any amin'ny fitaovana misy anao.
Ao amin'io Ask the Admin io, nanazava ny fomba nanosihan'i Microsoft fanavaozam-baovao momba ny Windows 10 sy ny fomba hanodinana ny fampiasana amin'ny Windows Update sy Windows Update for Business.
The lahatsoratra Ahoana ny fametrahana Windows Updates momba ny Windows 10 niseho voalohany tamin'ny Petri.
Apple sy Microsoft miasa mba hamaha ny bug iCloud amin'ny Windows
Ahoana no fametrahana sy mampiasa iCloud amin'ny Windows 10
Tsy afaka mifandray amin'ny serivisy ProfSVC ny Windows
Clone Windows 10 amin'ny USB mitondra ny boot anywhere
June 2016 fanavaozana fanavaozana ho an'ny Windows 7 SP1 dia mamaha ny Windows Update malaky
Mampahafantatra ny Windows 10 Creators Update (Redstone 2) ny Microsoft
2018 upgrade from windows 7 to windows 10 ltsc windows 10 Fitaovana (Windows) Windows 10 windows 10 ltsc windows 10 ltsc download windows 7 to windows 10 upgrade 2018 Windows Server Update Services windows vaovao farany